सामाजिक सञ्जालमा आज : कोरोना भाइरसले स्पेस खोजीरहेको थियो, "हामीले दियौं" | एक्सप्रेस | GNN Nepal GNN Nepal सामाजिक सञ्जालमा आज : कोरोना भाइरसले स्पेस खोजीरहेको थियो, "हामीले दियौं" | एक्सप्रेस | GNN Nepal
सामाजिक सञ्जालमा आज : कोरोना भाइरसले स्पेस खोजीरहेको थियो, “हामीले दियौं”
वैशाख १३ गते, २०७८ १९:११ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपालमा पहिलेको वर्ष यहि समयमा लकडाउन भैसकेको थियो भने फाट्टफुटटलाइ मात्रै कोराना संक्रमण हुन्थ्यो । करिव ६ महिना लामो लकडाउन र निषेद्याज्ञाले मंसिरसम्म आउँदा लगभग कोरोनो साम्य भैसकेको थियो । सबै क्षेत्रका मानिसहरु पुन आफ्ना काममा फर्किएका थिए । अस्पतालहरुलाई पनि बिरामीको चाप बढेको अवस्था थिएन । तर यो चैतको पहिलो सातातिर आइपुग्दा सबै बदलियो । फेरि संक्रमणदर बढ्न थाले । र अब त देशमा कोरोनाको महासंकट नै आइआग्न खोज्दै छ ।
देशका अस्पतालहरुमा कोरोनाका गम्भिर कोरोना बिरामीलाई राख्न समेत बेड, भेन्टिलेटर, आइसियु पुगेको अवस्था छैन । दिनदिनै तीन हजार ३५ सय को हाराहारीमा कोरोना पोजेटिभ भेटिन थालेका छन् भने दैनिक १५ जना भन्दा बढीको मृत्यु हुने क्रम जारी छ । हिजो मात्रै २८ जनाको मृत्यु भयो । जसलाई निकै डरलाग्दो तथ्यांक भएको स्वास्थ्यविद्हरु बताउँछन् ।
यो सबै भइँरहदा अझै पनि हामी सडकदेखी रेस्टुरेन्टसम्म सामाजिक दुरि पालना गरेको देखिँदैनौं । सार्वजनिक यातायातहरुमा ठेलमठेल गरेर बस्छौं । सामान्य बाहिर निस्किदाँ समेत मास्क लगाउँदैनौं । सरकारले पालना गर्न लगाएको स्वास्थ्यका मापदण्डहरु कतै पालना गरिएको देखिंदैन ।
यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ- समूदायमा पहिलैदेखी भएको कोरोना र त्यसमाथि भारतबाट आएको कोरोना पनि मिसिनाले कोरोनाको उत्परिवर्तन रुपहरु बन्दै गएका थिए । त्यसलाई फैलन स्पेस चाहिएको थियो । अर्थात् मानिसको जमघट, लापरवाह चाहिएको थियो जुन हामीले सजिलै दियौं र अझै पनि कोरोनाको यो लहरलाई गम्भिर लिएका छैनौं ।
यसोमा कोरोना नफैलिए के फैलन्छ त ? यसलाई थप व्याख्या गर्दै डा. लुना भट्ट सामाजिक संजालमा लेख्छिन्, “जब पहिलो वेभ पछि जनजिवन सामान्य हुन थाल्यो,सबैले बिर्सिए साबधानी पालन गर्न। भाइरसको बिरुध्द धेरैले प्रतिरोधकातम्क शक्ति बिकसित गरिसकेका थिए। तर,भाइरस को प्रकृती अनुसार ऊ आफ्नो अनुकूलता खोजी रहेको थियो, त्यो मौका हामीले फेरी दियौं। भिड,भेट घाट ,मास्क नलगाउने“
जब पहिलो वेभ पछि जनजिवन सामान्य हुन थाल्यो,सबैले बिर्सिए साबधानी पालन गर्न।
भाइरसको बिरुध्द धेरैले प्रतिरोधकातम्क शक्ति
बिकसित गरिसकेका थिए।
तर,भाइरस को प्रकृती अनुसार ऊ आफ्नो अनुकूलता खोजी रहेको थियो, त्यो मौका हामीले फेरी दियौं।
भिड,भेट घाट ,मास्क नलगाउने !
— Dr.Luna Bhatta Sharma (@Lunabs8) April 26, 2021
त्यस्तै, डाक्टर भट्टले संजाल मार्फत् नै कोरोनाको चेन ब्रेक गर्न सल्लाह दिएकि छिन् ।
उनले भनेकि छिन्, “भाइरस मानिसबाट मानिसमा सर्यो, इम्युनीटी भएको देखेपछि उसमा त्यो छल्न म्युटेसन हुन थाल्यो। यो म्युटेसनले भाइरसलाई हरेक मानिसमा पहिले भन्दा छोटो समयमा सन्क्र्मण गर्न र प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई चक्मा दीई फैलिन शुरु गर्यो
नतिजा दोस्रो वेब त्यसैले चेन ब्रेक भन्दा अचुक उपाय अरु हुंदैन।”
यसैमा प्रयोगकर्ताले जनतालाई सुझाएका थप केहि सामाग्री
सकेसम्म घरबाहिर ननिस्कौं, आपतकालिन अवस्थामा निस्कनै परे डबल सर्जिकल मास्क लगाऔं! आफन्त हो, साथीभाइ हो, चिनेको मान्छे हो भन्नेबित्तिकै मास्क खोलेर नबोलौं!
स्यानिटाइजर बारम्बार हातमा लगाइराखौं, तर साबुनपानीको व्यवस्था भए साबुनपानीले हात धुने बानी बसालौं! +
— उतुलु (@Utulmaya) April 26, 2021
"सुरुवाती लक्षण हुँदा" ->"कोभिड-१९ का लक्षण देखिंदा"
पल्स अक्सिमिटरले दिनमा ३-४ पटक अक्सिजनको मात्रा जाँच्नुहोस्
"ज्वरो कम गर्ने औषधी"
"प्रशस्त पानी वा झोल कुरा पिउनुहोस्"(नुन, चिनी, पानी नभनी)
Budesonide २ पफ दिनमा २ पटक तान्ने (कुल १६०० माइक्रोग्राम प्रति दिन)
— Anup (@AnupSubedee) April 25, 2021
Tocilizumab मृत्युदर पनि घटाउने भनेर देखिएको औषधी हो। त्यसैले "मृत्युदर घटाउँदैन" सही होइन। तर dexamethasone पनि पाइरहेका, अस्पतालमा भर्ना भएका, र अक्सिजनको आवश्यकता निकै चाँडो बढ्दै गएका बिरामीलाई मात्र दिन उपयुक्त हुन्छ।
"प्रायः फाइदा नगर्ने औषधी"
".. जस्ता एन्टिबायोटिक,..आदि
— Anup Bastola (@docanup11) April 23, 2021
४ ज = जात्रा,जुलुस,जनभेट ,जिम्मेबारीबोध बिहिन
यस्ले गर्दा, छिमेकमा भयाबह स्थीति देख्दा पनी, धेरै सकारात्म सोच र यथार्थपरक नभएर ,बिज्ञानमा अबिस्वासको कारणले क्षती भईनै सक्यो, समयमा नै सरकारले छुट्टा छुटै टीम बनाएर उपचार तिर ,परिक्षण तिर, नियंत्रण तर्फ ध्यान दियोस 🙏
— Dr.Luna Bhatta Sharma (@Lunabs8) April 25, 2021
कोरोन भाइरस (#COVID19) संक्रमण भए पछि गरिने उपचार सम्बन्धि केहि उपयोगी जानकारी. pic.twitter.com/Ti9EK0Djfb
— Mukesh (@mshgastromed) April 25, 2021
असार १२ : पशुपति नाथको दर्शन गर्दै हेर्नुहोस् आजको राशिफल
फुटपाथमा दशैंं : पहिलेको जस्तो छैन व्यापार ( फोटो फिचर)
कार्तिक ८ गते, २०७७